Job 36 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Elaịhu kwuru otú Chineke si dị ukwuu (1-33)
Ihe na-agaziri ndị na-erube isi, ma a na-ajụ ndị na-anaghị asọpụrụ Chineke (11-13)
“È nwere onye na-akụzi ihe otú o si akụzi?” (22)
Job kwesịrị ịja Chineke mma (24)
“Chineke dị ukwuu karịa otú anyị nwere ike ịmata” (26)
Chineke na-eduzi mmiri ozuzo na àmụ̀mà (27-33)
36 Elaịhu kwukwara, sị: 2 “Nwetụkwuoro m ndidi ka m kọwaara gị ihe m na-ekwu,N’ihi na m ka nwere ihe m ga-ekwu n’aha Chineke. 3 M ga-ekwu ihe m ma otú ga-edo anya,M ga-akpọkwa Onye kere m onye ezi omume.+ 4 N’eziokwu, ihe m na-ekwu abụghị ụgha. Onye ma ihe niile+ nọ gị n’ihu n’ebe a. 5 N’eziokwu, Chineke dị ike,+ ọ naghịkwa ajụ onye ọ bụla. Ọ na-aghọta ihe nke ọma. 6 Ọ gaghị ahapụ ndị ajọ omume ndụ.+ Ma ọ ga-ekpere ndị na-ata ahụhụ ikpe ziri ezi.+ 7 Ọ naghị ewepụ anya ya n’ebe ndị ezi omume nọ.+ Ọ na-eme ka ha nọrọ n’ocheeze,*+ a na-ebulikwa ha elu ruo mgbe ebighị ebi. 8 Ma ọ bụrụ na e kee ha agbụ ígwè, Jirikwa ụdọ e ji ata mmadụ ahụhụ jide ha, 9 Ọ ga-eme ka ha mata ihe ha mere,Bụ́ mmehie ndị ha mere maka na ha dị mpako. 10 Ọ na-adọ ha aka ná ntị,Na-agwakwa ha ka ha kwụsị ime ihe ọjọọ.+ 11 Ọ bụrụ na ha erube isi ma fee ya,Ihe ga-agaziri ha ná ndụ ha niile,Ndụ ha ga-atọkwa ha ụtọ.+ 12 Ma ọ bụrụ na ha erubeghị isi, a ga-eji mma agha* gbuo ha,+Ha ga-anwụkwa n’amaghị ihe. 13 Ndị na-anaghị asọpụrụ Chineke* na-ebu iwe n’obi. Ọ bụrụgodị na o kee ha agbụ, ha anaghị arịọ ka e nyere ha aka. 14 Ha na ụmụ nwoke bụ́ ndị akwụna* na-anọ,*+Ha* na-anwụkwa mgbe ha ka bụ okorobịa.+ 15 Ma Chineke* na-anapụta ndị na-ata ahụhụ n’ahụhụ ha. Ọ na-emeghe ntị ha n’oge a na-emegbu ha. 16 Ọ na-anapụta gị n’ahụhụ+Ka ị nọrọ n’ebe sara mbara, n’ebe a na-enweghị ihe na-akpagide gị,+N’ebe ezigbo nri nke dị na tebụl gị ga-eme ka obi gị jụrụ.+ 17 Mgbe ahụ, ikpe a mara ndị ajọ omume ga-eju gị afọ,+Mgbe e kpere ha ikpe ziri ezi, meekwa ha ihe e kpebiri. 18 Ma kpachara anya ka iwe ghara ime ka i mewe ihe ọjọọ,*+Anakwala aka azụ, ka ọ ghara idufu gị. 19 Ákwá ị na-ebe ka e nyere gị akaMa ọ bụ mbọ ị na-agbasi ike ọ̀ ga-eme ka ị kwụsị ịta ahụhụ?+ 20 Atụla anya ka abalị ruo,Bụ́ mgbe ndị mmadụ na-apụ n’ebe ha nọ. 21 Lezie anya ka ị ghara imewe ihe ọjọọ,N’ihi na ọ bụ ya ka ị na-ahọrọ kama ịta ahụhụ.+ 22 Lee, a na-eto Chineke n’ihi ike ya. È nwere onye na-akụzi ihe otú o si akụzi? 23 Ònye gwatụrụla ya ihe ọ ga-eme*+Ma ọ bụ sị ya, ‘Ihe i mere adịghị mma’?+ 24 Cheta ka ị jaa ọrụ ya mma,+Bụ́ nke ndị mmadụ jirila bụọ abụ.+ 25 Mmadụ niile ahụla ya. Mmadụ efu nọ n’ebe dị anya na-ele ya. 26 N’eziokwu, Chineke dị ukwuu karịa otú anyị nwere ike ịmata.+ E nweghị ike ịghọta* afọ ndụ ya.+ 27 Ọ na-amịkọrọ mmiri niile tasara n’ala.+ Ha na-aghọ mmiri ozuzo na alụlụụ. 28 Ha na-esizi n’ígwé ojii zoo.+ Ha na-ezo, onye ọ bụla enweta mmiri. 29 È nwere onye ga-aghọtali otú e si gbasaa urukpuruMa ọ bụ ghọta ụda égbè eluigwe nke si n’ebe o bi?*+ 30 Lee otú o si agbasa àmụ̀mà* ya+ n’elu ya,Na-ekpuchikwa ogbu* oké osimiri. 31 Ọ na-eji ihe ndị a eme ka ndị mmadụ dịrị ndụ.* Ọ na-enye ha ihe oriri n’ụba.+ 32 Ọ na-eji aka ya ekpuchi àmụ̀mà,Ọ na-eduzikwa ya ka ọ gaa n’ebe ọ na-aga.+ 33 Égbè eluigwe ya na-akọ banyere ya,Anụ ụlọ na-ekwukwa onye* na-abịa.
^ O nwere ike ịbụ, “Ọ na-echi ndị mmadụ eze.”
^ Ma ọ bụ “Ndị kwụsịrị ife Chineke fewe chi ọzọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “na-anwụkọ.”
^ Na Hibru, “ka ị kụọ aka,” ya bụ, ụdị ịkụ aka na-egosi mkparị.
^ O nwere ike ịbụ, “katọtụrụla ya; kpọtụrụla ya ka ọ zaa ajụjụ.”
^ Ma ọ bụ “n’ụlọikwuu ya.”
^ Na Hibru, “ìhè.”
^ Ma ọ bụ “ala ala.”
^ O nwere ike ịbụ, “na-eji ihe ndị a ekpechitere ndị mmadụ ọnụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ihe.”